Semalt: कोरोनाभाइरसको बखत SEOमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने बारे १० तरिकाहरू
Semalt: कोरोनाभाइरसको बखत एसईओ मा कसरी लगानी गर्ने भन्ने बारे १० तर तरिका
कोरोनाभाइरस आज सर्च इन्जिनको संसारमा एक विशाल विषय हो। प्रभाव स्पष्ट छ, किनकि गुगलले एक उपकरण बनाएको छ जुन यस मुद्दाको साथ लोकप्रियता ट्र्याक गर्दछ। थप विवरणहरूको लागि कोरोनाभाइरस खोज प्रवृत्तहरू उपकरण जाँच गर्नुहोस्।
"कोरोनाभाइरस" शब्द हालका महिनाहरूमा कम भएको छ। जब कथाहरू र संक्रमणले संसारभरका मानिसहरूलाई असर गरिरहन्छ, तपाई शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ कि शीर्षक बढ्नेछ। यसले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा ल्याउँछ। के COVID को समयमा SEO मा लगानी गर्न लायक छ?
छोटो उत्तर हो हो। तपाइँका विज्ञापनहरू अधिक समयसापेक्ष बनाउनको लागि, यसले तपाइँलाई COVID को समयमा सहायताको स्रोतको रूपमा तपाइँलाई स्थिति प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं COVID वरपर केन्द्रित सामग्री सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। साथै, अन्य सहयोगी सामग्री सिर्जना समयको बावजुद अझै उपयोगी छ।
१66 प्रतिशत सबै अनलाइन खुद्रा आदेशहरूमा। अन्य डिजिटल सेवाहरूसँग यस मामलामा एक असामान्य अवसर छ, र हामी यी लेखहरूलाई यस लेखमा सम्बोधन गर्दैछौं।
विषयमा सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्
यदि तपाईं म जस्तो हुनुहुन्छ, कोरोनाभाइरसले तपाईंको बाहिर जाने र काम गर्ने तपाईंको क्षमतालाई गहिरो प्रभाव पार्यो। यसले धेरै दिनहरू सिर्जना गरेको छ जहाँ तपाईं भित्र के गर्ने सल्लाहको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ। नतिजाको रूपमा तपाईको घर निष्खोट हुन सक्छ।
यो पीडा विश्वमा साझा समस्या हो। नतिजाको रूपमा, व्यक्तिहरू मानसिक पीडालाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने बारेमा विचारहरू खोज्दैछन् जुन घरमै बस्न आउँदछ। कुनै पनि संगठनले वर्तमान परिस्थितिमा उनीहरूले के गर्ने लागू गर्न एउटा तरिका फेला पार्न सक्दछन्।
तल विचार गर्नुपर्ने केही उदाहरणहरू छन्।
स्वास्थ्य उद्योगमा कसैले गर्न सक्छन् यस समयमा कसरी राम्रो रहन सकिन्छ भन्ने बारे सल्लाह दिनुहोस्।
लुगा बनाउँदा शूमेकरहरूले आरामदायक लुगा लगाउने सुविधा प्रदान गर्न सक्दछ।
खुद्रा स्टोरहरूले तपाईंलाई क्राफ्टिंग आपूर्तिको नयाँ लाइनको बारेमा कुरा गर्न सक्दछ। घरमा गर्न सक्दछ।
डेकेरेसले कसरी तपाइँका बच्चाहरूलाई मास्क राख्नका लागि सिकाउने बारेमा ब्लग गर्न सक्दछ।
लाखौं उदाहरणहरू छन् जुन तपाईं हुनुहुन्छ। प्रयोग गर्न सक्दछ जबकि तिनीहरू सँधै स्पष्ट हुँदैनन्, कुनै पनि व्यवसायले उनीहरूको व्यवसायको एउटा अंश भेट्टाउन सक्दछ जुन COVID को बखत मानिसहरूलाई मद्दत गर्दछ। COVID सम्बन्धित कुञ्जी शब्दहरूलाई लक्षित गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
शिक्षित सामग्री लेख्नुहोस्
कोरोनाभाइरसको साथ, धेरै व्यवसायहरूले आफ्नो रणनीति समायोजित गर्नुपर्‍यो। कम्पनीहरू बाहेक, धेरै व्यक्तिहरू यो नयाँ रणनीति बुझ्नको लागि विफल भएका छन्। तपाईंको लक्षित श्रोताको बावजुद, यसले तपाईंलाई शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट अवसर दिन्छ।
शिक्षा ब्लगिंगको साथ साझा रणनीति हो, किनकि तपाईंले जे भए पनि आफ्ना ग्राहकहरूलाई शिक्षा दिन खोज्नुपर्दछ। । COVID लाई तपाईले यो रणनीति अगाडि बढ्नु पर्छ। कोरोनाभाइरसलाई शिक्षाको अतिरिक्त आयामको रूपमा लिनुहोस्। Forty प्रतिशत मानिसहरूले खरीद गर्ने बढी सम्भावना छ एक ब्रान्डबाट यदि यसले शिक्षा प्रदान गर्दछ।
तपाईंको डिजिटल अफरिंगमा फोकस गर्नुहोस् वा महामारीको उत्तर
मानिसहरू यस समयमा उनीहरूको घरबाट बाहिर निस्किने सम्भावना कम हुन्छ। नतिजाको रूपमा, यो तपाइँको डिजिटल प्रस्ताव बढाउनको लागि अर्को अवसर हो। वालमार्ट जस्ता प्रमुख कम्पनीहरूले उनीहरूको "सम्पर्क रहित वितरण" अनुप्रयोगको साथ यो काम गरेको छ। सानो खुद्रा स्टोरहरूले पोस्टमेट जस्ता कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरेर यस मुद्दालाई पूरक बनाएको छ।
सानो व्यवसायको रूपमा तपाईलाई के पेशकश गरिरहेको छ भनेर जनतालाई जानकारी दिन यो तपाइँको काम हो। यदि तपाइँ एक रेस्टुरेन्ट चलाउनुहुन्छ, तपाइँको पृष्ठ मा "सम्पर्क रहित वितरण" राख्नु भनेको तपाइँको क्षेत्रमा खाना खोजी गर्नेहरूले यस अवसर प्रदान गर्दछ। तपाईले यि कुञ्जी शव्दहरू ब्लगमा तपाइँको ग्राहक आधारमा समावेश गर्न सक्नुहुनेछ।
जबकि यो सबै उद्योगहरूको लागि सजिलो छैन, तथ्या us्कले हामीलाई भन्दछ डिजिटल प्लेटफार्मको सम्भावना। उदाहरण को लागी, तपाइँको सानो शहर उपकरण को पसल एक अनलाइन स्टोर को लागी प्रस्ताव गरीरहेछ कि SEO संग एक स्थान लक्षित गर्दछ। जब तपाईं स्थानीय एसईओ रणनीति का साथ अनुसरण गर्नुहुन्छ, यसले तपाईंलाई नयाँ अवसर दिन्छ।
लामो-फारम सामग्री विचार गर्नुहोस्
यदि त्यहाँ कोरोनाभाइरसले गरेको एक कुरा छ भने, यसले हाम्रो निःशुल्कसँग के गर्ने भनेर पत्ता लगाउन आवश्यक पर्‍यो। समय व्यक्ति निरन्तर कुनै पनि स्रोतको बारेमा शंकास्पद हुन्छन्, र लामो-फारम सामग्री पाठकलाई अधिक जानकारी प्रदान गर्दछ। यो रणनीति एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान गर्दछ कि सामग्री राम्रोसँग लेखिएको छ।
यो रणनीति COVID तपाईंलाई खाली समय दिइएको हुन सक्छ। फेरि, यसलाई विकासको अवसरको रूपमा अवलोकन गरेर, यसले तपाईंलाई लामो-फारम सामग्री उत्पादन गर्ने क्षमता दिन्छ। यस विषयले हामीलाई लामो पुच्छर खोजीमा ल्याउँदछ।
<< डिव << लामो पुच्छर कुञ्जी शब्द तीन- लाई हुन् चार-शब्द कुञ्जी शब्दहरू जुन तपाईको शीर्षकमा अविश्वसनीय रूपमा विशिष्ट छन्। तिनिहरु जो तपाईको विशेष व्यवसाय खोजिरहेका छन् उनीहरुलाई यो अधिक सजिलोसँग फेला पार्न अनुमति दिन्छ। लामो-फारम सामग्री तपाइँलाई यी लामो-पुच्छ खोजशब्दहरू समावेश गर्न एक उत्तम तरिका प्रदान गर्दछ।
दीर्घकालीन सामग्रीको साथ सजिलै खोजीयोग्य भएर, तपाइँ बढी सम्भावना हुनुहुन्छ व्यक्तिहरू द्वारा चाहिएको सामग्री उत्पादन गर्नुहोस्। तपाईंको लेखमा अतिरिक्त रियल इस्टेटले व्यक्तिहरू तपाईंलाई लिंक गर्न को लागी एक उत्कृष्ट कारण प्रदान गर्दछ। व्यक्तिहरू सँधै कुनै चीजमा "अन्तिम मार्गनिर्देशक" खोजिरहेका हुन्छन्।
पुरानो सामग्री पुन: ताजा गर्नुहोस्
सामग्री पुनःप्रचार हुन विचार गर्नुहोस्। प्रयोगयोग्य फिर्ता आउन सक्ने चीजको रूपमा सामग्रीको राम्रो अंशलाई विचार गर्नुहोस्। यो विशेष रूपमा लामो-फारम सामग्रीसँग सत्य छ, जुन छोटो भागहरूमा पुन: प्रयोग हुने सम्भावना रहेको छ।
पुरानो सामग्री वर्तमान ट्रेंडहरूमा पनि लागू गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, पुरानो सामग्री को पुन: प्रयोग गर्नु भनेको एक अनुभवी सामग्री सृष्टिकर्ता द्वारा एक ब्लग सुझाव हो, जसमा नील पटेल।
तपाईंको पुरानो ब्लग पोष्टहरू अझै पनि यस मितिमा ट्राफिक हुन सक्छ। तपाईंले आफ्नो अधिक लोकप्रिय पोष्टहरू छनौट गर्नुपर्दछ, किनकि ती शक्तिहरू प्रमाणित छन्। COVID जस्ता आधुनिक फ्रेमवर्कको साथ तिनीहरूलाई पुन: पोस्ट गरेर, तपाईंले पहिले नै धेरै जसो काम गरिसक्नुभयो।
यदि तपाईंसँग कम्तिमा एक बर्षको मूल्यको सामग्री छैन भने यो रणनीतिबाट जोगिनु नै उत्तम हुन्छ। यो उत्तम हो यदि तपाईले केहि वर्ष पहिले ल्याउनु भएको हो। व्यक्तिहरूले यी पुराना ब्लग पोष्टहरू याद गर्न सक्ने छैनन्।
सदाबहार सामग्री बनाउँनुहोस्
सदाबहार सामग्रीको नामकरण गरिएको छ किनकि सदाबहार रूख जीवन नविकरण गर्नुहोस्। सदाबहार जस्तो फिर रूखहरू, जाडोमा उनीहरूको पातहरू हराउँदैनन्। यो निरन्तर वृद्धिको संकेतको रूपमा लिइन्छ।
सदाबहार सामग्रीको म्याद सकिने मिति हुँदैन। त्यसैले उत्पाद समीक्षा, वार्षिक तथ्या .्क, र समाचार पोस्टहरू "सदाबहार" हुँदैन। यसको सट्टामा, सदाबहार सामग्रीले सूची पोष्टहरू, कसरी ब्लगहरू, र भिडियोहरू समावेश गर्दछ। यो दिमागमा राखेर, तपाईं हाम्रो अन्य सुझावहरूको तुलनामा यो विरोधाभासी हुन सक्नुहुन्छ।
किन तपाईं यस्तो समयको लागि लेख्नुहुन्छ जुन समय पर छैन? किनकि तपाईं एकल बिषयमा तपाईंको सबै सामग्री फोकस गर्न सक्नुहुन्न। यो मुद्दा मा चासो को मृत्यु पछि आफ्नो वेबसाइट अवरुद्ध हुनेछ। नतिजाको रूपमा, स्वस्थ मिश्रण फेला पार्न उत्तम हुन्छ।
धेरै ब्लगहरूको साथ, तपाईको आलामा विशिष्ट रहेको शीर्षक भेट्टाउनु उत्तम हुन्छ। यदि तपाईं जुत्ता लगाउने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने, तपाईंको सदाबहार सामग्री निम्न हुन सक्छ:
विभिन्न प्रकारका जुत्ता शैलीहरू
नर्सहरूको लागि पाँचवटा उत्तम जुत्ता प्रकारहरू
कसरी तपाइँको जुत्ता (विभिन्न प्रविधि) स्ट्रिंग गर्ने
तल शीर्षकहरूका उदाहरणहरू छन् जुन सदाबहार मानिदैन।
नाइकेको नयाँ जुत्ता
आगामी जुत्ताहरूको लागि नयाँ टेक्नोलोजी
तपाइँका लक्ष्यहरूको वरिपरि सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्
सामग्री सिर्जना गर्दा, यो कार्यको योजना हुनु उत्तम हो। तपाईंको सामग्री यातायात चलाउन, बिक्री बढाउन, नयाँ उत्पादनको विज्ञापन गर्न, वा तपाईंको ईमेल सदस्यता बढाउनको लागि हुन सक्छ। यो अविश्वसनीय रूपमा COVID को समयमा महत्त्वपूर्ण छ, किनकि तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूले पहिले नै योजना बनाइसकेका हुन्छन्।
दिमागमा विशिष्ट लक्ष्य राखेर सामग्री सिर्जना गरेर, तपाईं सम्भावना बढी गर्नुहुन्छ यो उदाहरण को लागी, यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइट को लागी यातायात ड्राइव को लागी खोज्नु भएको छ, तपाईं सम्भवतः हामी पहिले उल्लेखित सदाबहार सामग्री केहि पोस्ट गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईंको ब्लग कसरी मार्गनिर्देशनहरू र सूची पोष्टहरूको भरखरै हुनेछ।
यदि तपाईं बिक्री बढाउनको लागि सामग्री सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ भने, कसरी तपाईंको पोष्टिंग सोधिन्छ खरीदको लागि। तपाईं सामग्रीको टुक्राहरू बनाउन सक्नुहुन्छ जहाँ तार्किक निष्कर्ष तपाईंको उत्पादन हो। यदि तपाईं आफ्नो इ-मेल सदस्यता बढाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईंको पोष्टहरूले अनुरोध बनाउँदछ। एक लक्ष्य बिना, तपाईं प्रतिस्पर्धा हुनुभन्दा पहिले आफैलाई ल cri्ग बनाउनुहोस्।
एसईओ अभियानमा लगानी गर्नुहोस्
एसईओ सल्लाहको अन्तिम अंश हामी Semalt मा फिर्ता आउँछौं। SEO एक जटिल कुरा हुन सक्छ। जबकि हामीले गरेका धेरै सुझावहरूले तपाईंलाई पोष्टको लागि श्रेणीमा ल्याउँदछ, Semalt बाट एसईओ अभियानको साथ तपाईंको प्रयासहरूको पूरकले तपाईंलाई किनारामा ल्याउन सक्छ।
Semalt लगानी को बिभिन्न स्तर को एक किसिम को छ। यदि तपाइँ के छनौट गर्ने बारे अनिश्चित हुनुहुन्छ भने यो बुझिन्छ। COVID ले धेरै जीवनलाई असर गरेको छ, र यसले प्रत्येक लगानीलाई महत्वपूर्ण बनाउँदछ। तपाईं प्रमाणित सफलताको साथ केहि छनौट गर्न चाहानुहुन्छ।
COVID ले हामी कसरी गर्छौं व्यापारमा गहिरो प्रभाव पार्दछ। हामी सामान्य स्थितिमा फर्किए पछि पनि, हामी पहिले जस्तो हौं त्यस ठाउँमा फर्कने ग्यारेन्टी छैन। त्यो तर्क एसईओ मा पनि लागू हुनेछ।
गुगल हामीलाई आश्वासन दिन्छ कि एसईओ प्रत्येक बर्ष एक समान छैन। नतिजाको रूपमा, हामीले प्रतिस्पर्धी रहनको लागि हाम्रो रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्दछ। यो निरन्तर रहिरहने कुराको लागि राम्रो सामग्री सिर्जना गर्नु आवश्यक छ।
सामग्री उत्पादन समयमै हुनुपर्दछ। COVID वरपर आधारित सामग्री सिर्जना गरेर, तपाईं आफैंलाई ज्ञानको ठाँउमा राख्दै हुनुहुन्छ। कोरोनाभाइरस मार्फत मानिसहरूलाई मद्दत गर्ने "विशेषज्ञ" को रूपमा, तपाईले त्यो ट्राफिकलाई विश्वसनीय स्रोतको रूपमा कायम राख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं केवल COVID मा पोस्ट गर्न आफैलाई सीमित गर्न सक्नुहुन्न। तपाईलाई अझै सदाबहार सामग्री पोष्ट गर्न आवश्यक छ जुन मानिसहरूले आउने बर्षौंसम्म प्रशंसा गर्नेछन्। पुरानो सामग्रीलाई पुन: प्रयोग गर्ने र पुन: प्रयोग गर्ने इच्छुकताको साथ यसलाई जोड्नुहोस्; तपाईं सामग्रीमा व्यक्ति आकर्षित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जसले तपाईंको डिजिटल र भौतिक सेवाहरू बढाउँदछ।
<< एक href="https://semalt.com को साथ तपाईंको एसईओ बढाउँदै।/"> Semalt कसरी एक व्यक्तिले यी टेकनीकहरूलाई उच्च स्तरमा ल्याउँछ। यो सुनिश्चित गर्न हाम्रो लक्ष्य हो कि तपाईंको व्यवसाय सफलताको लागि तयार हुनेछ, COVID लाई परवाह नगरी। हामी तपाईंलाई र तपाईंको परिवारलाई यस कठिन समयमा सुरक्षित रहन प्रोत्साहित गर्दछौं।